के दक्षिण कोरियाले फेरि भिजा सकिन लागेका कामदारको भिजा १ बर्ष थपेको हो? बुझौं – Eps Sathi
के दक्षिण कोरियाले फेरि भिजा सकिन लागेका कामदारको भिजा १ बर्ष थपेको हो? बुझौं
December 5, 2021 2503
दक्षिण कोरियाका केहि न्युज साइटहरुले विदेशी कामदारको भिजा अवधि १ बर्ष थप गरेको भन्ने आशयका समाचार प्रकाशित भएपछि दक्षिण कोरियामा रोजगारी गरिरहेका हजारौं नेपाली कामदारहरु यतिखेर खुशी भएका छन। यध्यपी उक्त समाचारको आशय त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरुले सोचे जस्तै अर्थात भिजा अबधि सकिन लागेकाहरुको १ बर्ष थप गरेको हो वा हैन भन्ने विषयमा भने अझै प्रष्ट भइ सकेको छैन।
दक्षिण कोरियामा रहेका थुप्रै नेपाली कामदारहरुले आफूहरुको भिजा अबधि थप भएको हो भन्ने अनुमान गरेका छन भने केहिले भने यस अघि थपेको समाचार हो नयाँ हैन भनेका छन। यस विषयमा केहि समयपछि थप प्रस्ट हुन सकिने देखिन्छ। दक्षिण कोरियाका समाचार माध्यमहरुले कोरियन भाषामा लेखेका कारण धेरैलाई बुझ्न कठिन भइरहेको छ। यस सम्बन्धि समाचार कोरियान न्यूज पोर्टलहरुले डिसेम्बर २ तारिख नै लेखेका छन।
हामीले उक्त साइटमा कोरियन भाषामा लेखिएको समाचार उल्था गर्दा यस्तो हुन आएको छ। ” साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव समाधान गर्न विदेशी कामदार भित्र्याउने क्रम पनि बढाइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण स्वदेश प्रवेश गर्ने विदेशी कामदारको सङ्ख्यामा प्रतिबन्धका कारण यस वर्ष असोज १ गतेसम्म ६ हजार ५० अर्थात कुल कोटाको दशांश मात्रै कामदार भित्रिएका छन्।”
“सरकारले सबै पठाउने देशहरूमा प्रवेश अनुमति दियो र प्रवेश गर्नु अघि खो’प पूरा भइसकेको र पीसीआर परीक्षणको नतिजा ने’गेटिभ आएको आधारमा देश प्रवेश गर्नेहरूको संख्याको सीमा हटायो। साथै, ३ वर्ष वा ४ वर्ष १० महिना सेवा गरी स्वदेश फर्कनु पर्ने विदेशी कामदार (E-9, H-2) को बसाइ र जागिर खोज्ने अवधि एक वर्ष थप गरिएको छ। गत वर्षको १ गतेसम्म कुल ६५ हजारले आफ्नो बसाइ र रोजगारी अवधि थपेका छन् रणनीति र अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामी साइटमा नियामक नवप्रवर्तन कार्यदल र आर्थिक समूहका प्रमुखहरूसँग बैठकहरू मार्फत व्यवसाय र व्यवसायी समुदायसँग सञ्चार गर्नेछौं, र क्षेत्र उन्मुख मार्फत व्यापारको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न प्रयास गर्नेछौं।”
हामीले उक्त समाचारलाई नेपालीमा अनुवाद मात्र गरेको हुनाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले सोचे जस्तो भिजा अबधि सकिन लागेका हरुको १ बर्ष थप भएको हो वा हैन भन्ने विषया यसै भन्न सकिन्न। यध्यपि यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा बुझ्न भने प्रयासरत रहेका छौं। यस अघि पनि दक्षिण कोरियाले भिजा अबधि सकिन लागेकाहरुको भिजा १ बर्ष थप गरेको थियो।
Prevकोरियाबाट फर्केर डटपेन उध्योग, नेपालमै लाखौं आम्दानी
Nextकोरियाका मानिसहरु आफूले आफैंलाई किन थप्पड हान्छन? कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित
कोरियामा मूल्यबृध्दि ९ बर्षयताकै उच्च
इन्डियन लाहुरे राहुल र स्मिता बिच पुनर्मिलन
को’रोना फै’लाएको भन्दै कोरियाको एक चर्चलाई ब’न्द गर्ने आ’देश